I-End-to-End Analytics Isiza Kanjani Amabhizinisi | Martech Zone
Ama-analytics okuphela kokugcina akuyona nje imibiko nemidwebo emihle. Ikhono lokulandela umkhondo weklayenti ngalinye, kusukela endaweni yokuqala yokuthinta kuya ekuthengeni okujwayelekile, kungasiza amabhizinisi ukunciphisa izindleko zeziteshi zokukhangisa ezingasebenzi futhi ezingabizi kakhulu, zikhuphule i-ROI, futhi zihlole ukuthi ukuba khona kwabo ku-inthanethi kukuthinta kanjani ukuthengisa okungaxhunyiwe kwi-inthanethi. OWOX BI abahlaziyi baqoqe izifundo ezinhlanu zamacala ezibonisa ukuthi ama-analytics asezingeni eliphakeme asiza amabhizinisi ukuba aphumelele futhi abe nenzuzo.
Usebenzisa ama-End-to-End Analytics ukuhlola iminikelo eku-inthanethi
Isimo. Inkampani ivule isitolo esiku-inthanethi nezitolo ezimbalwa ezidayisa ngokomzimba. Amakhasimende angathenga izimpahla ngqo kuwebhusayithi yenkampani noma azihlole ku-inthanethi bese eza esitolo sangokwenyama azothenga. Umnikazi uqhathanise imali engenayo evela ekuthengisweni okuku-inthanethi nokungaxhunyiwe ku-inthanethi futhi uphethe ngokuthi isitolo esingokoqobo siletha inzuzo ethe xaxa.
Igoli. Nquma ukuthi uzokuyeka yini ukuthengisa okuku-inthanethi bese ugxila ezitolo ezibonakalayo.
Isixazululo esisebenzayo. Inkampani yezingubo zangaphansiDarjeeling Ifunde umphumela we-ROPO - umthelela wokuba khona kwayo ku-inthanethi ekuthengisweni kwayo okungaxhunyiwe ku-inthanethi. Ochwepheshe baseDarjeeling baphethe ngokuthi u-40% wamakhasimende avakashele isiza ngaphambi kokuthenga esitolo. Ngenxa yalokho, ngaphandle kwesitolo esiku-inthanethi, cishe isigamu sokuthengiwe kwabo bekungeke kwenzeke.
Ukuthola lolu lwazi, inkampani ithembele ezinhlelweni ezimbili zokuqoqa, ukugcina nokucubungula idatha:
I-Google Analytics ngolwazi mayelana nezenzo zabasebenzisi kuwebhusayithi
I-CRM yenkampani yemininingwane yokuqedela izindleko nezoku-oda
Abathengisi baseDarjeeling bahlanganisa idatha evela kulezi zinhlelo, ezazinezakhiwo ezihlukile kanye nomqondo. Ukwakha umbiko ohlanganisiwe, iDarjeeling isebenzise uhlelo lwe-BI kuma-analytics wokugcina.
Usebenzisa ama-End-to-End Analytics ukukhuphula inzuzo ekutshalweni kwemali
Isimo. Ibhizinisi lisebenzisa iziteshi ezimbalwa zokukhangisa ukuheha amakhasimende, kufaka phakathi usesho, ukukhangisa okuqukethwe, amanethiwekhi omphakathi, nethelevishini. Zonke ziyahluka ngokuya ngezindleko nokusebenza kwazo.
Igoli. Gwema ukukhangisa okungasebenzi futhi okubizayo futhi usebenzise kuphela ukukhangisa okusebenzayo nokushibhile. Lokhu kungenziwa kusetshenziswa izibalo zokuphela kokuphela ukuqhathanisa izindleko zesiteshi ngasinye nenani elisilethayo.
Isixazululo esisebenzayo. KuhleloUdokotela Ryadom uchungechunge lwemitholampilo yezokwelapha, iziguli zingakwazi ukuxhumana nodokotela ngeziteshi ezahlukahlukene: kuwebhusayithi, ngocingo, noma endaweni yokwamukela izivakashi. Amathuluzi ejwayelekile e-web analytics abengenele ukunquma ukuthi isivakashi ngasinye sivelaphi, noma kunjalo, ngoba idatha yayiqoqwa ezinhlelweni ezahlukahlukene futhi ingahlobene. Abahlaziyi beketanga kwakudingeka bahlanganise idatha elandelayo ohlelweni olulodwa:
Idatha emayelana nokuziphatha komsebenzisi kusuka ku-Google Analytics
Shayela idatha kusuka kumasistimu wokulandela amakholi
Imininingwane yezindleko ezivela kuyo yonke imithombo yokukhangisa
Imininingwane mayelana neziguli, ukwamukelwa, kanye nemali engenayo evela ohlelweni lwangaphakathi lomtholampilo
Imibiko esuselwa kule datha ehlanganisiwe ikhombise ukuthi iziphi iziteshi ezingakhokhelanga. Lokhu kusize iketanga lomtholampilo ukuthi lisebenzise kahle ukusetshenziswa kwemali kwesikhangiso. Isibonelo, ekukhangiseni okuqukethwe, abathengisi bashiye imikhankaso kuphela ngama-semantics angcono futhi bakhuphula isabelomali sama-geoservices. Ngenxa yalokhu, uDokotela Ryadom wandise i-ROI yeziteshi ngazinye izikhathi ezingama-2.5 futhi wehlisa izindleko zokukhangisa ngesigamu.
Usebenzisa i-End-to-End Analytics Ukuthola Izindawo o Ukukhula
Isimo. Ngaphambi kokuthi uthuthukise okuthile, udinga ukuthola ukuthi yini ngempela engasebenzi kahle. Isibonelo, mhlawumbe inani lemikhankaso nemishwana yokusesha ekukhangiseni kokuqukethwe lenyuke ngokushesha okukhulu kangangokuba akusakwazi ukulawulwa ngesandla. Ngakho-ke uthatha isinqumo sokushintsha ukuphathwa kwebhidi. Ukuze wenze lokhu, udinga ukuqonda ukusebenza kwesigatshana ngasinye kwezinkulungwane eziningana zokusesha. Ngemuva kwakho konke, ngokuhlolwa okungalungile, ungahlanganisa isabelomali sakho ngalutho noma uhehe amakhasimende ambalwa angaba khona.
Igoli. Linganisa ukusebenza kwegama ngalinye elingukhiye ngezinkulungwane zemibuzo yokusesha. Qeda ukusetshenziswa kwemali ngokuchitha imali nokutholwa okuphansi ngenxa yokuhlolwa okungalungile.
Isixazululo esisebenzayo. Ukwenza ngokuzenzakalela ukuphathwa kwebhidi,Hoff, Umthengisi wehypermarket wefenisha nezinto zasendlini, uxhume zonke izikhathi zabasebenzisi. Lokhu kubasizile ukulandelela izingcingo, ukuvakashelwa ezitolo, nabo bonke oxhumana nabo nesayithi kunoma iyiphi idivayisi.
Ngemuva kokuhlanganisa yonke le datha nokusetha ama-analytics wokugcina, abasebenzi benkampani baqala ukusebenzisa ukunikezwa - ukwabiwa kwenani. Ngokuzenzakalelayo, i-Google Analytics isebenzisa imodeli yesichasiso sokugcina sokuchofoza engaqondile. Kepha lokhu kukuziba ukuvakashelwa okuqondile, futhi isiteshi sokugcina neseshini kuketanga lokuxhumana lithola inani eligcwele lokuguqulwa.
Ukuthola idatha enembile, ochwepheshe be-Hoff basetha ukubalulwa okususelwa kuphele. Inani lokuguqulwa elikulo lisatshalaliswa phakathi kwazo zonke iziteshi ezibamba iqhaza esinyathelweni ngasinye sefeleshini. Lapho befunda imininingwane ehlanganisiwe, bahlole inzuzo yegama ngalinye elingukhiye futhi babona ukuthi yiziphi ezingasebenzi futhi eziletha ama-oda amaningi.
Abahlaziyi beHoff basetha lolu lwazi ukuthi lubuyekezwe nsuku zonke futhi ludluliselwe ohlelweni lokulawulwa kwamabhidi oluzenzakalelayo. Amabhidi ayalungiswa ukuze usayizi wawo ulingane ngqo ne-ROI yegama elingukhiye. Ngenxa yalokhu, i-Hoff inyuse i-ROI yayo yokukhangisa ngokwengqikithi ngo-17% yaphindaphinda inani lamagama asemqoka asebenzayo.
Usebenzisa ama-End-to-End Analytics ukwenza ngezifiso ukuxhumana
Isimo. Kunoma yiliphi ibhizinisi, kubalulekile ukwakha ubudlelwano namakhasimende ukwenza okunikezwayo okufanele nokulandela izinguquko ekuthembekeni komkhiqizo. Vele, lapho kunezinkulungwane zamakhasimende, akunakwenzeka ukwenza okunikezwayo okwenzelwe wena ngamunye wabo. Kepha ungazihlukanisa zibe izingxenye eziningana futhi wakhe ukuxhumana nenye yalezi zingxenye.
Igoli. Hlukanisa wonke amakhasimende abe yizingxenye eziningana futhi wakhe ukuxhumana nenye yalezi zingxenye.
Isixazululo esiwusizo. AButik, Inxanxathela yezitolo yaseMoscow enesitolo esiku-inthanethi sezingubo, izicathulo, nezinye izinsimbi, ithuthukise umsebenzi wazo namakhasimende. Ukwandisa ukwethembeka kwamakhasimende nenani lempilo yonke, abathengisi bakwaButik baxhumana ngezifiso ngesikhungo sezingcingo, i-imeyili, kanye nemiyalezo ye-SMS.
Amakhasimende ahlukaniswe ngezigaba ngokuya ngomsebenzi wabo wokuthenga. Umphumela wayo wawuhlakazekile idatha ngoba amakhasimende angathenga ku-inthanethi, a-ode online futhi acoshe imikhiqizo esitolo esingokomzimba, noma angasebenzisi nhlobo isiza. Ngenxa yalokhu, ingxenye yedatha yaqoqwa yagcinwa ku-Google Analytics nenye ingxenye ohlelweni lweCRM.
Bese abathengisi bakwaButik bakhomba ikhasimende ngalinye nakho konke ukuthenga kwabo. Ngokuya ngalolu lwazi, banqume amasegmenti afanelekile: abathengi abasha, amakhasimende athenga kanye ngekota noma kanye ngonyaka, amakhasimende ajwayelekile, njll. Ngokuphelele, bakhombe izingxenye eziyisithupha futhi bakha imithetho yokuziguqula kusuka esigabeni esisodwa kuye kwesinye. Lokhu kuvumele abathengisi bakwaButik ukuthi bakhe ukuxhumana okwenziwe ngezifiso nengxenye ngayinye yamakhasimende futhi babakhombise nemiyalezo ehlukene yokukhangisa.
Usebenzisa ama-End-to-End Analytics ukunquma ukukhwabanisa ekukhangiseni kwe-Cost-Per-Action (CPA)
Isimo. Inkampani isebenzisa imodeli yezindleko zesenzo ngasinye ekukhangiseni okuku-inthanethi. Ibeka izikhangiso futhi ikhokhele amapulatifomu kuphela uma izivakashi zenza isenzo esiqondisiwe njengokuvakashela iwebhusayithi yazo, ukubhalisa, noma ukuthenga umkhiqizo. Kepha ophathina ababeka izikhangiso abahlali besebenza ngokuthembeka; kukhona abakhohlisi phakathi kwabo. Imvamisa, laba bakhohlisi bafaka indawo yomthombo womgwaqo ngendlela yokuthi kubonakale sengathi inethiwekhi yabo iholele ekuguqulweni. Ngaphandle kwama-analytics akhethekile akuvumela ukuthi ulandelele zonke izinyathelo ezikuchungechunge lokuthengisa futhi ubone ukuthi yimiphi imithombo ethonya umphumela, cishe akunakwenzeka ukuthola ukukhwabanisa okunjalo.
I-Raiffeisen Bank bekunenkinga ngokukhwabanisa kwezentengiso. Abakhangisi babo bebebonile ukuthi izindleko zomgwaqo ezihambisanayo zikhuphukile ngenkathi imali isalokhu injalo, ngakho-ke banqume ukubhekisisa umsebenzi wozakwethu.
Igoli. Thola ukukhwabanisa usebenzisa ama-analytics wokugcina. Landelela zonke izinyathelo ezikuchungechunge lokuthengisa futhi uqonde ukuthi imiphi imithombo ethonya isenzo samakhasimende esiqondisiwe.
Isixazululo esiwusizo. Ukuhlola umsebenzi wozakwethu, abathengisi eRaiffeisen Bank baqoqe imininingwane eluhlaza yezenzo zomsebenzisi esizeni: imininingwane ephelele, engacutshungulwa, nengacwaningiswanga. Phakathi kwawo wonke amaklayenti anesiteshi sokusebenzisana sakamuva, bakhethe labo abanamakhefu amafushane ngokungajwayelekile phakathi kwezikhathi. Bathole ukuthi ngalezi zikhathi zekhefu, umthombo wethrafikhi ubushintshiwe.
Ngenxa yalokhu, abahlaziyi bakaRaiffeisen bathola abalingani abambalwa ababekhipha ithrafikhi yangaphandle beyithengisa futhi ebhange. Ngakho-ke bayeka ukusebenzisana nalaba bantu abalingani futhi bayeka nokumosha isabelomali sabo.
Izibalo Zokuqeda Ukuphela
Sibonise izinselelo zokukhangisa ezivame kakhulu ezingasombululwa yistelo sezibalo zokuphela kokuphela. Ngokwenza, ngosizo lwedatha ehlanganisiwe yezenzo zomsebenzisi kuwebhusayithi naku-inthanethi, imininingwane evela kumasistimu wokukhangisa, nedatha yokulandelela izingcingo, ungathola izimpendulo zemibuzo eminingi ephathelene nokuthi ungalithuthukisa kanjani ibhizinisi lakho.
Tags: isenzoizindleko ngesenzo ngasinyeudokotela ryadomUkuphela kokuphelaizibalo zokuphela kokuphelaawu bi